Ingrid Wikholm on sparktur qaaday fursad ay ku siiyaan inuu rahaamaddii HSK / duurku HBU ee khafiif ah.
Qaado taagan iyo marsamaysa mishiinka iyo malqacad ururada Holm aad rahaamadda! A kaalin soo dhaweyn diiran. Tuur in foosto rahaamad ka dhacay kaniisad ama aad leedahay way soo gaaray guriga. OBS! Waxa kale oo aanu aqbali daasadaha dhaawacan oo dibadda laga keeno!
HBU iyo Holm Sports Club ayaa bixiya dhammaan gobolka Holm iyo Sundsvall si ay u taageeraan ururada la qasacadaha ay jir ah iyo dhalooyin PET. Waxa kaliya oo kale, samaynayaan deegaanka raalli ah, halka bixinta qayb yar! Waxa kale oo aad ka fogaato rahaamad lugging magaalada iyo fool ah ururinta mishiinka for småkronor qaar ka mid ah. noo, si kastaba ha ahaatee, waxa ay taasi ka duwan kasta caawinaad badan! Duurku Slanten muuqda oo loo xilsaaray 50/50 dhexeeya HSK iyo HBU.
Single ama bacaha ee xayawaanka, daasadaha deposit iyo dhalooyin.
Ku dar rahaamad cagaaran särkild khafiif ah ee soo socota si ay u kala soocidda qashinka ka dhacay kaniisad Holm ayaa. foosto ay faaruqdo ka dibna waxaan si joogto ah.
bacaha qashinka la rahaamad (PET FADLAN soocaa / burk / deposit galaas halkii jawaan!).
Ururiya jawaan qaar ka mid ah oo noo soo sheeg markii aad rabto in laga takhaluso oo ka mid ah – 0730-332944.
– Alt. 1 ka tag in Holm iyo Sundsvall, SMS:text / call for info badan oo ku saabsan meesha.
– Alt. 2 iyaga Iska meel qaaday i Holmberg / LIDEN- / Kovland- / Sundsvall deegaanka. SMS:text / call oo waxaad ku tidhaahdaa jawaan sida badan, iyo meesha aad ku nooshahay / shaqada aan qaban doonaa inta ka dhiman!
Ma doonaysaa in aad nooga caawiso ururiyaan ballan ama aad ku nooshahayon meelo kale oo Sweden? Haddii aad tahay qof ku filan “pantad” oo hantiyi doonaan in yar oo dheeraad ah “ruux tuulada” si xor ah inay naga caawiyaan si ay u ururiyaan ballan meesha aad degan tahay, meel kasta oo aad ku nooshahay. Waxaan aad xooji bacaha gacanta gaar ah in aad si fudud u tago on a site dhibic-off kuu dhow (marnaba in aad taagan iyo ballan qaadayaa hal iyo a!).
Ha illoobin ah mashiinada jir ah Norwegian rahaamad iyo taageero Baaddiyaha Holm Enoch Holms SK…